अभिलेख Archives - News Today
राजविराज, ४ चैत्र । सिके राउतले नेतृत्व गर्दैआएको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको लहानमा सम्पन्न राष्ट्रिय परिषद ...
राजविराज, ४ चैत्र । सिके राउतले नेतृत्व गर्दैआएको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको लहानमा सम्पन्न राष्ट्रिय परिषद् बैठकले पार्टीको नाम ‘जनमत पार्टी’ राख्ने निर्णय गरेको छ । सरकारसँग भएको ११ बुद्दे सहमतिपछि पह ...
राजविराज, २४ फागुन । स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका केन्द्रीय संयोजक डा. सीके राउत र नेपाल सरकार बीच शुक्रवार १ ...
राजविराज, २४ फागुन । स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका केन्द्रीय संयोजक डा. सीके राउत र नेपाल सरकार बीच शुक्रवार ११ बुँदे सहमति भएको छ । स्वतन्त्र मधेश देशको माग राखेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दैआएको उक्त सङ्गठन ...
सप्तरी, २५ भदौ । देशमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको भनिन्छन् । तर सप्तरीक ...
सप्तरी, २५ भदौ । देशमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको भनिन्छन् । तर सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिका वडा नम्वर ४ का ३६ दलित परिवारले भने गाउँमा सरकार पुगेको अनुभूती गर्न पाएका ...
राजविराज, २२ असार । न्यूज टुडे दैनिक पत्रिका एंव अनलाइनका सम्पादक श्यामसुन्दर यादवसहित १५ सदस्यीय ‘नेपाली ...
राजविराज, २२ असार । न्यूज टुडे दैनिक पत्रिका एंव अनलाइनका सम्पादक श्यामसुन्दर यादवसहित १५ सदस्यीय ‘नेपाली मिडिया टोली २०१८’ शुक्रवार चीन प्रस्थान गरेका छन् । सप्तरीलाई कार्यक्षेत्र बनाएर विगत १७ वर्षद ...
श्यामसुन्दर यादव रञ्जितपुर, २७ वैशाख । सामान्तयाः हाम्रो समाजमा गाईवस्तुलाई दाम्लोमा बाँधेर राखिन्छ । केह ...
श्यामसुन्दर यादव रञ्जितपुर, २७ वैशाख । सामान्तयाः हाम्रो समाजमा गाईवस्तुलाई दाम्लोमा बाँधेर राखिन्छ । केही समयका लागि भए पनि चराउन बाहिर लगिन्छ । तर सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका–६ रञ्जीतपुर गाउँको एक ...
राजविराज मालपोत कार्यालयमा यस्तो छ घुसको रहस्य
श्यामसुन्दर यादव राजविराज, १६ वैशाख । सप्तरीको राजविराज स्थित मालपोत कार्यालयमा खुलेआम घुस लिने गरेको गुन ...
श्यामसुन्दर यादव राजविराज, १६ वैशाख । सप्तरीको राजविराज स्थित मालपोत कार्यालयमा खुलेआम घुस लिने गरेको गुनासाहरु नौलो होइनन् । सेवाग्राहीको काम गरे वापत सम्वन्धित फाँटका कर्मचारीले गैरकानूनी रुपमा रकम ...